Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 10
Wararka Dibada	Weerar khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay magaalada Istanbuul.
Iyadoo habeenkii xalay ahaa meelo badan oo katirsan Caalamka looga dabaal degayay waxa loogu yeero bilashada sanadka cusub ayaa waxaa si aad ah loo adkeynayya amaanka dalal badan. Dalka Turkiga meel lagu caweeyo xilliyada habeenkii ah oo ay ka socdeen dabaaldegyo ayaa weerar khasaare badan dhaliyay lagu qaaday, waxaana faafaahin kala duwan ay kasoo baxeysaa khasaaraha rasmiga ah ee ...	Read More »
Donalad Trump oo eedeymo culus u jeediyay Obama.
Iyadoo maalma qur ah ay ka harsanyihiin kala wareega madaxweynaha Maraykanka Obama iyo Donalad Trump oo loo doortay hogaaminta Maraykanka ayaa waxaa muuqanaya khilfaad u dhexeeya labada madaxweyne. Donald Trump oo ku caan ah siyaasadda qallafsan ayaa eedeymo dusha kala dhacay madaxweynaha Maraykanka Obama, wuxuuna ku eedayay inuu carqaladeynayo kala wareejinta xilka. Wuxuu sheegay in Obama uu ka filyay in ...	Read More »
Dagaallo ka dhacay dalka Yemen oo Xuuthiyiin badan lagu laayay.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ku dhexmareen gobolka Shabwah ciidamada xukuumadda Haadi iyo malleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo taageero ka helaya ciidamada Cali Cabdalla Saalax. Dagaallada oo dhacay maalintii shalay ayaa ahaa kuwa xoogan, waxaana ay ka dhaceen degmada Bayaan ee gobolka Shabwah halkaas ay isku farasaareen xuuthiyiinta iyo kuwa Haadi Mansuur. Sarkaal katirsan ciidamada dowladda ...	Read More »
Ninka ku guuleystay madaxtinimada dalka Maraykanka ee lagu magacaabo Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday ururka la magac baxay Qaramada Midoobay ee fadhigiisu yahay dalka Maraykanka, kaas oo ka kooban inta badan dowladaha caalamka. Donald Trump ayaa aad uga carooday go’aan dhawaan kasoo baxay Fadhi ay yeesheen Qaramada Midoobay kaas oo ay kaga soo horjeestay deegaameysiga Yahuuddu ka ...	Read More »
Nidaamka Suuriya oo kordhiyay duqeymaha uu ka wado duleedka magaalada Dimishiq.
Nidaamka daa’ifiga ah ee uu hogaaminayo Bashaar Al-Asad ayaa wada gumaad ba’an oo ka dhan ah dadka Ahlu sunnaha ee dega dhulka Shaam, waxaana gumaadkaas ku gacan siinaya dowladaha caalamaka intooda badan haba ugu badnaadaane Iiraan iyo Ruushka. Muda laga joogo shan maalmood oo xiriir ah ayaa diyaaradaha Nidaamka waxay duqeymo aan kala joogsi lahayn kawadaan magaalada Waadi Bardi iyo ...	Read More »
Diyaarad Militeri oo Ruusku leeyahay oo burburtay iyo dhamaan dadkii saarnaa oo dhintay.
Waaberigii saaka ayaa diyaarad nooca milliteriga ah oo ay leedahay wasaaradda dagaalka ee dowladda Ruushka waxay kasoo duushay garoonka magaalada Sotshi ee dalka Ruushka iyadoo kusii jeeda magaalada Laadiqiyah ee dalka Suuriya. Diyaaradda waxaa saarnaa 91 Ruux oo 83 kamid ah ay yihiin ciidamada Booliiska ee sida milliteriga u tababaran, waxaana 8 kale ay yihiin shaqaalaha diyaaradda. Warar warbaahintu tabineyso ...	Read More »
DEG-DEG: Diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay oo la la’yahay.
Warbaahinta Ruushka noocyadooda kala duwan ayaa baahinaya khabarka ah in la la’yahay halka ay jaan iyo cirib dhigtay diyaarad milliteri oo saaka kasoo kicitantay dalka Ruushka, kuna sii jeeday dalka Suuriya. Diyaaraddan ciidan oo ay saaranyihiin kudhowaad boqol Ruux oo u badan ciidamo katirsan milliteriga Ruushka iyo shaqaalaha diyaaradda ayaa la waayay daqiiqado kadib markii ay kasoo kicitantay garoon ku ...	Read More »
Dowladda Shiicada ah ee Iiraan oo kumanan dagaalyahanno ah ay ka joogaan dalka Suuriya kuwaas oo ka garab dagaalamaya ciidamada Ruushka iyo kuwa Nidaamka Bashaar Al-Asad ayaa ku faaneysa barakicinta ay ku heyso Muslimiinta Ahlu sunnaha ah. Hogaamiyaha guud ee ciidanka kacaanka Iiraan ninka lagu magacaabo Muxamed Cali Jacfari ayaa si cad u sheegay in dagaalka ka dhacay magaalada Xalab ...	Read More »
Rabshado ka taagan dalka Congo oo dad badan ay ku dhinteen.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa waxaa ka socoanay iska hor imaadyo u dhexeeya ciidamada Amaanka iyo taageerayaasha Mucaaradka dalkaas oo kasoo horjeeda in talada dalkaas uu sii hayo madaxeynaha mudada dheer ku fadhiya kursiga Madaxtooyada. Magaalada Kinshasa oo ah caasimadda dalka ayaa maalintii shalay waxaa ka dhacay iska hor imaadyo balllaaran oo u dhexeeya Booliiska iyo dadka shacabka ah, waxaana Booliisku ...	Read More »
DEG-DEG: Safiirkii Ruushka ee dalka Turkiga oo la dilay.
Waxaa goordhow magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga lagu toogtay safiirkii u fadhiyay Ruushka dalkaas. Qof ku hubeysnaa Bastoolad ayaa rasaas ooda kaga qaaday Safiirka oo ka hadlayay kulan ka socoday magaalada Ankara. Safiirka ayaa markii hore waxaa soo gaaray dhaawac culus, waxaana markaas kadib loola cararay cisbitaalka isagoona u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Ruuxa weerarka fuliyay oo ku hadlaya ...	Read More »
Page 10 of 41« First...«89101112	»	203040...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan